Subway Princess Runner 3.0.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.0.7 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Subway Princess Runner
Subway Princess Runner ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မြေအောက်မင်းသမီးလေးပြေးသမား, ဘတ်စ်ကားပြေး, စွဲလမ်းအဆုံးမဲ့ပြေးဂိမ်း နှင့်သစ်တောအလုအယက်!
မြန်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်အဆောတလျင်, ထိုလမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားရှောင်။ တော၌သတိထားအဆိုပါလှိမ့သစ်သား! ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှစိတ်လှုပ်ရှားဆလိုက်ပိုဒင်္ဂါးပြားရရှိရန်မိုဃ်းကောင်းကင်၌ခုန်, left သို့မဟုတ်ညာဘက်ကို run ဖို့အလိုလိုထိန်းချုပ်မှု!
ရဲမှလွတ်မြောက်ရန်သင်ချစ်လှပသောမင်းသမီးကူညီပါ! နှစ်ဆစေးထွက်ရှိပြီးနောက်စကိတ်စီးကိုအသုံးပြုပါက, မြေအောက်ရထားထဲမှာထူးခြားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ခံစားရသည်။ မိတျဆှေစာရငျးတှငျကမ္ဘာကြီးကိုကစားသမားသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရမှတ်များနှင့်အတူရာထူးများ၏အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုစိန်ခေါ်မယ်။
ပိုပြီးရမှတ်မျိုးစုံ ရရှိရန်အဆင့်ကို Unlock ။ ပြီးပြည့်စုံသောမစ်ရှင်သို့မဟုတ်သေတ္တာများဖြင့်သင့်အဆင့် သော့ဖွင့်ဖို့အတှေ့အကွုံရ။ သင်ပိုမိုရမှတ်မြှောက်ကိန်း, သငျသညျအရမြင့်မားရမှတ်။
မြေအောက်ရထားမင်းသမီးလေးပြေးသမားလှပတဲ့မင်းသမီးလေးကိုကယ်တင်အကောင်းဆုံးပြေးသမားဖြစ်မည်ဟု, အဆုံးမဲ့မင်းသမီးလေးပြေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးဇာတ်ကောင်ရရန်အဆင့်အထိ Unlock, သင် # 127939 & နိုင်ပါတယ်အဖြစ် ပို. ပို. စိန်သို့မဟုတ်ဒင်္ဂါးပြား Get ;!
& # 128073; Dodge သည့်လမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရထား, ဘတ်စ်ကားနှင့်ပိုပြီးအတားအဆီး
& # 128073; ရမှတ်မျိုးစုံအဆင့်တွေနဲ့ related ဖြစ်ပါတယ်
& # 128073; အတွေ့အကြုံကိုစုဆောင်း, level ကို Unlock,
& # 128073; Gain အတွေ့အကြုံကိုပြည့်စုံမစ်ရှင်သို့မဟုတ်သေတ္တာများအားဖြင့်
& # 128073; ကြိုတင်မဲအတွက်တုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှု, Dodge နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးရမှတ်
& # 128073; အာဏာတက်တိုးမြှင့်ဖို့က upgrade, ကျားကန်သုံးစွဲဖို့သင်ယူပါ duratio
& # 127939; မြေအောက်မင်းသမီး Runner အင်္ဂါရပ်များ:
။ နှင်းမြေအောက်ရထား, မြို့နှင့်သစ်တောမြင်ကွင်းတစ်ခု
.Best မင်းသမီးလေးပြေးသမား & # 127942;
။ မြန်သငျသညျ လုပ်နိုင်အဖြစ် Rush
။ Influent မျက်နှာပြင်ထိတွေ့ & ဆွဲငင်အားထိန်းချုပ်မှု
စကိတ်စီးအဘို့အ .Double ကိုထိပုတ်ပါ, အထူးပြေး feeling
သင့်ရဲ့အေးမြသင်္ဘောသားနှင့်အတူ .Grind ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား
.Colorful နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း, HD ဂရပ်ဖစ်
.Complete မစ်ရှင်, level ကိုသော့ဖွင့်ဖို့အတှေ့အကွုံရဖို့။
Subway Princess Runner အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Subway Princess Runner အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Subway Princess Runner အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Subway Princess Runner အား အခ်က္ျပပါ
discorally စတိုး 213 140.5k
Subway Princess Runner ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Subway Princess Runner အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.0.7
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/site/riooprivacypolicy/
လက်မှတ် SHA1: 71:0E:F0:1B:B1:CD:B4:10:B1:DD:4A:0F:6A:34:51:E1:4A:CF:33:76
Subway Princess Runner APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ